musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » tsika nemagariro » Duesseldorf HELAU! Mapenzi ari muzhinji kupemberera hupenyu!
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Entertainment • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • misangano • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Rekodha nhamba dzeCorona Virus hadzina kumisa vanhu muDuesseldorf, Germany kupemberera hupenyu, zvinorevei kupemberera kutanga kweCarnival nhasi.
Iyo Hoppeditz yamuka muDuesseldorf, asi kwete zvakanyanya muCologne!
MuDuesselorf, Guta reGerman paRwizi Rhine, Kick-off yaitika nhasi Nov 11, 2021 na11:11 am yeCarnival Session 2021/2022.
Carnival ndeye mapenzi. Uye vakaungana pamberi peDuesseldorf City Hall
Nguva isina carnival muDuesseldorf yapera.
Hoppitz yamuka. Kusvika pa11.11. nenguva dza11.11 akabuda muhari yake yemasitadhi akaverenga vaRevhi mapenzi kuvakuru veguta. Ishe Mayor Dr. Stephan Keller vakapindura nehurukuro pfupi kubva pavharanda, mushure mokunge aburuka kuHoppeditz Tom Bauer pamusika wemusika.
Parizvino, shamwari zhinji dzecarnival hadzina kukwanisa kutevera chiitiko chegore negore chakamirirwa nechido, sezvavakaita gore rapfuura, asi zvakare mumunhu panzvimbo.
Zviuru zvakashandisa mukana uyu uye zvakapembera pamwe chete nekutanga kwechirongwa.
Carnival muDuesseldorf ine sirogani:
Mushure mekutaura kwaHoppeditz, Komiti yeDüsseldorfer Carnival yakaratidza mutambo mutsva wecarnival panhandare yemhepo pamberi pehoro yeguta.
Pakati pevamwe, Swinging Funfares uye KG Regenbogen, uyo akaita rwiyo rwemotto, Alt Schuss, Kokolores, De Fetzter nevamwe vakawanda vaivapo.
Muchikamu, mapenzi ehurumende yehurumende achatungamirirwa naPrince Dirk II (Dr. Dirk Mecklenbrauck) uye Venetia Uåsa (Uåsa Katharina Maisch).
Musi waNovember 13, Jecken diki inopemberera kumuka kwevana mopeditz paBurgplatz pavhiri reFerris. Niklas Wesche ane makore gumi okukura anobva kuRheinische Garde Blau-Weiss achapemberera kutanga kwake se mopeditz yevana.
Kusarudzwa kwevaviri vemuchinda kuchaitika musi wa19 Mbudzi muStadthalle. Kubva kuAltweiber neRathaussturm musi wa24 Kukadzi 2022, chikamu chichapinda muchikamu chinopisa. Chinonyanya kukosha ndechekuratidzira kweRose Muvhuro pa28 Kukadzi 2022.
Nehurombo muCologne iri padyo, guta rine Carnival mune gene remunhu wese, muchinda airwara neCorona Virus.